संविधानको धारा ३७० सँग जाेडेर मोदीबारे टिप्पणी गरेकी राखीकाे ट्वीटर अकाउन्ट बन्द « Naya Page
संविधानको धारा ३७० सँग जाेडेर मोदीबारे टिप्पणी गरेकी राखीकाे ट्वीटर अकाउन्ट बन्द
प्रकाशित मिति : 11 August, 2019 12:54 pm
काठमाडौं, २६ साउन । रिपब्लिकन पार्टी अफ इण्डिया (ए) को महिला विभागकी अध्यक्ष तथा बलिउड अभिनेत्री राखी सावन्त संविधानको धारा ३७० को खारेजको सन्दर्भमा दिएको बयानका कारण विवादमा तानिएकी छिन् ।
उनले जम्मू–कश्मिरको सम्बन्धमा मोदीलाई धन्यवाद दिंदै बनाएको भिडियोले सामाजिक सञ्जाल भाइरल भइरहेको छ । उनले भनेकी छिन्, ‘मोदीजी धन्यवाद ! हाम्रो कानुन त्यहाँ लागू भएको छ । कश्मिर हाम्रो भएको छ । मलाई तपाईंप्रति गर्व छ । तपाईं एकदमै महान् हुनुहुन्छ ।’
उनले भिडियोमा नारा लगाउँदै भनेकी छिन्, ‘हाम्रा नेता कस्ता छन्, हाम्रा प्रधानमन्त्री कस्ता छन्, मोदीजी जस्ता छन्’ । उनले अगाडि भनेकी छिन्, ‘मोदीजी, तपाईं करोडौं वर्षसम्म बाँचिरहनुहोस् । हामी सबै तपाईंकै सन्तान हौं ।’
भिडियो बनाउँदै राखीले भनेकी छिन्, ‘म आफ्ना निर्देशक तथा प्रोड्युसरलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु । जसले मलाई धारा ३७० फिल्ममा लिएका छन् । फिल्मको सुटिङ कस्मिरमा, कुल्लुमा भइरहेको छ ।’
यद्यपि, भिडियो बनाउँदै गर्दा राखीले कुल्लु कशिमरमा नभई हिमाञ्चल प्रदेशमा पर्ने कुरा बिर्सिएकी छिन् । राखीले उक्त भिडियो कारमा सुटिङ गरेकी थिइन् । ट्वीटरले नियम तोडेको कारण उनको भिडियो सस्पेन्ड गरिदिएको छ । एजेन्सी
दुर्घटनाको डरले राति मुडेमा बास बसेका यात्रुमाथि उज्यालो नहुँदै आइपर्‍यो त्यहि ‘आपत’
बिहेको भोलिपल्टै पत्नीको हत्या, घटना लुकाउन यसरी झुक्याए
छोरीलाई डेरामा एक्लै राखेर यातना र धम्की दिंदै बलात्कार !
बहिनीसँग आपत्तिजनक अवस्थामा भेटेपछि साथीको कुटीकुटी हत्या
मध्यराति शक्तिशाली बम विष्फोट हुँदा दुईको मृत्यु, इन्स्पेक्टरसहित चार जना गम्भीर घाइते
दुई जोइको पोइ, अन्तिममा कोही न कोही : निखिल उप्रेती
नेपालगञ्ज, ३० मंसिर । दुई दिन अघिको हिउँदे झरीले बाँकेका किसानले लगाएको अन्नबालीमा ठूलो क्षति
हुन्डीदेखि सुन तस्करसँग एसएसपीको कनेक्सन
काठमाडौं, ३० मंसिर । अवैध हुन्डीबाट अरबौंको कारोबार भइरहेको भए पनि प्रहरीले आँखा चिम्लने गरेको
सुर्खेत, ३० मंसिर । तिला गाउँपालिका–९ जुम्ला ढिपुगाउँका १२ जना शेरा फूलबारी पाटनबाट बेपत्ता भएका
काठमाडौं, ३० मंसिर । चलचित्र विकास वोर्ड अध्यक्ष केशव भट्टराईको आइतबार राति असामयिक रुपमा निधन
कलाकार दीपक क्षेत्री मृत फेला
काठमाडौं, २९ मंसिर । कलाकार दीपक क्षेत्री मृत भेटिएका छन् । क्षेत्री डिल्ली बजारस्थित आफ्नै